I-Forest View Deluxe Cottage
Igumbi lakho lokulala e i-resort sinombuki zindwendwe onguAsheem
Indawo yethu yokuhlala yedeluxe inegumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala eliphindwe kabini elidityaniswe negumbi lokuhlambela elineetawuli kunye nezinto zangasese. Indlu yethu ye-deluxe ikwabonelela ngendawo yebarbecue kunye nokucima umlilo kwinkampu.
I-Rockville ibonelela ngendawo yokugcina uxolo kunye nobuhle kwabo bajonge indawo ezolileyo yokuphuma kwindawo ephithizelayo yobomi besixeko. Umoya ozolileyo kwindawo yokuphumla uvumela ukuba uphumle, uphumle ngokwenene kwaye ujabulele intlango engonakaliswanga eyingqongileyo. Le ndawo yokuchithela iholide elungele usapho ikwindawo efanelekileyo e-Ambukutty Mala kufutshane nelali yase-Ambalavayal kwaye ibonelela ngesiseko esifanelekileyo sokujonga kunye nokonwabela ubuhle obungenakuthelekiswa nanto beWayanad kunye neminikelo yayo.
Kwindawo yethu yokuchithela iiholide, yonwabele ukudityaniswa okugqibeleleyo kokuphumla kunye nokuzonwabisa, ukusuka kwimisebenzi egcweleyo efana nokhenketho lwezilwanyana zasendle, ukuhamba ezindleleni, kunye nokuthatha uhambo ukuya kwezo ziphumlayo ngakumbi ezinjengokufunda ecaleni kwephuli kwaye ukonwabela ukutshona kwelanga.
IMyuziyam yeLifa leMveli
Itempile yamandulo yaseJain
Umbuki zindwendwe ngu- Asheem
Iiyure ezingama-24 ngeNkonzo yeDesika yangaphambili
Iinkonzo zokugcina izindlu